MPITONDRA TUC- TUC AO TOAMASINA : Nitondra teny fisaorana ho an’ny Filoha Rajoelina
Nandritra ny fandalovan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Toamasina, nisy ny fangatahana nataon’ireo mpitondra tuc-tuc taminy. 24 mars 2019
Fangatahana alalana mba ho afaka hiasa alina. Misy mantsy ny fandraràna azy ireo tsy hiasa alina teo aloha. Tsy ireo mpamily tuc-tuc ihany no nangataka io fahazoan-dalana io fa ireo olona manana antom-pivelomana eny amin’ny moron-dranomasina. Nambaran’izy ireo mantsy fa tsy manana fahafahana mandeha fiarakaretsaka amin’ny alina izy ireo rehefa hamonjy fodiana ka tsara raha avela miasa amin’ny alina ireo tuc-tuc.
Ny zoma 22 marsa lasa teo, nisy avy hatrany ny fivoriana notanterahin’ireo mpitondra tuc-tuc nampahafantarana io fahazoana miasa amin’ny alina io. Fotoana izay nitondrana fisaorana ho an’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa. Mitaraina anefa ireo mpamily tuc-tuc ao Toamasina fa mbola misy amin’ireo polisy miasa alina no misakana. Io fitaovam-pitaterana io izay mamelona fianakaviana maro. Ireo tompony izay mampanofa 30 000 Ariary isan’andro.